Izindaba - Izinzuzo zomshini we-liquid sand blasting
Ngezidingo zemvelo yezimboni, abathengi abaningi ngokwengeziwe bakhetha uketshezi lwesihlabathi esiqhumile umshini esikhundleni somshini owomile wokuqhumisa umshini womshini wensimbi osetshenziselwa uketshezi osetshenziswa kakhulu ku: i-aerospace, i-elekthronikhi, insimbi, insimbi, isikhunta, imishini yamakhemikhali nokunye, kungaba esetshenziselwa ukucubungula umshini we-sand blasting machine. Liquid isihlabathi ukuqhumisa umshini uketshezi isihlabathi ukuqhumisa umshini. Liquid isihlabathi ukuqhumisa umshini ihlukile ezomile isihlabathi ukuqhumisa umshini, kuyinto ketshezi isihlabathi ukuqhumisa umshini iwukuba isihlabathi (olwalwenza) wafaka emanzini, amanzi nesihlabathi ingxube, bese usebenzisa futha ukugaya nomoya onomfutho, ngokusebenzisa isibhamu high-speed jet ezocutshungulwa ku-workpiece, ukufeza inhloso yokuhlanza indawo nokuqeda izingxenye. Umshini wokuqhuma isihlabathi owomile ngeke uhlanganise isihlabathi namanzi bese usebenzisa ipompo lokugaya uketshezi la. Liquid isihlabathi ukuqhumisa umshini uketshezi isihlabathi ukuqhumisa umshini. Liquid isihlabathi ukuqhumisa umshini ihlukile ezomile isihlabathi ukuqhumisa umshini, kuyinto ketshezi isihlabathi ukuqhumisa umshini iwukuba isihlabathi (olwalwenza) wafaka emanzini, amanzi nesihlabathi ingxube, bese usebenzisa futha ukugaya nomoya onomfutho, ngokusebenzisa isibhamu high-speed jet ezocutshungulwa ku-workpiece, ukufeza inhloso yokuhlanza indawo nokuqeda izingxenye. Umshini wokuqhuma isihlabathi owomile ngeke uhlanganise isihlabathi namanzi bese usebenzisa ipompo lokugaya uketshezi la.
Umshini we-sandblasting liquid ungcono kunomshini owomile we-sandblasting ngenxa yokusebenza kwawo okuphezulu nokusetshenziswa okungatheni kakhulu. Kungaba ngcono ebusweni sekugcineni namandla workpiece, futhi ngokuyisisekelo ushintshe inkinga ukungcoliswa kwemvelo. Ukufakwa kwemishini nakho kulula kakhulu, futhi akudingi indawo yokusebenzela ehlukile. Ingacutshungulwa ngqo kulayini wokukhiqiza.
Isicelo ububanzi umshini liquid sandblasting
Umshini we-Liquid sandblasting ubuye usetshenziswe kabanzi ezimbonini, njenge-Aerospace, i-elekthronikhi, insimbi, i-Hardware, isikhunta, imishini yamakhemikhali, njll. singene ikheshi ngokusebenzisa elihambayo isikulufa, futhi waphakamisa isihlukanisi ngu ikheshi ngokwahlukana. Uthuli oluqukethe igesi ludonswa kumqoqi wothuli ngumlandeli. Ngemuva kokuhlunga, iba umoya ohlanzekile futhi ikhishelwe emkhathini. Uthuli luwela ebhokisini lokuqoqa uthuli ezansi kwesiqoqi sothuli ngokushaywa ngumoya emuva, futhi umsebenzisi angakususa njalo. Isihlabathi semfucuza siphuma ngaphandle kwepayipi lokungcola futhi singasetshenziswa futhi ngabasebenzisi. Ingxube yesihlabathi esidutshuliwe iphinde isetshenziswe ekamelweni ngepayipi elisebenzisa kabusha, bese isetshenziswa futhi ngemuva kokuhlukaniswa isihlukanisi. Isakhiwo sedivayisi yokuqhumisa senziwa ngekhompyutha enezinhlangothi ezintathu, futhi wonke ama-engeli nezikhundla zokuhlelwa kunqunywa ukwakhiwa kwekhompyutha. Ngesisekelo sokunakekelwa kwazo zonke izinto zokusebenza okufanele zihlanzwe, ukuphonsa okungenalutho kwama-projectiles kufanele kuncishiswe ngangokunokwenzeka, ukuze kuthuthukiswe izinga lokusetshenziswa kwama-projectiles futhi kunciphise ukugqokwa kwamapuleti okuzivikela ekamelweni lokuhlanza.